Shirkadda Ugu Weyn Ee samaysa SIM-Card Ee Gemalto oo qirtey in la jabsadey | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shirkadda Ugu Weyn Ee samaysa SIM-Card Ee Gemalto oo qirtey in la jabsadey
Shirkadda Gemalto oo ah tan ugu weyn shirkadaha adduunka ee sameeya Kaararka Teleefanada ee loo yaqaan SIM ayaa sheegtey in ay u badan tahay in sirdoonka Maraykanka iyo Midowga Boqortooyada (UK) ay jabsadeen nidaamkooda, si ay u basaasaan una dhegaystaan Balaayiin qof oo isticmaala teleefanada.
Shirkadda Gemalto oo laga lee yahay dalka Holland xarumaheeda waaweyn ay ku yaalaan dalalka Faransiiska iyo Singapor ayaa ah shirkadda ugu weyn adduunka ee u qeybisa shirkadaha teleefanada adduunka kaararka teleefanada ee SIM-Cards, waxaana ay sanadkasta soo saartaa 2 milyan oo Kaar. Gemalto ayaa ah shirkad si weyn la isugu haleeyo dhanka aaminka kaararka ay samayso.
Shirkadda Gemalto ayaa sheegaysa in hay’adaha NSA iyo GCHQ ee dalalka US iyo UK ay ka danbeeyaan tuugnimo dhacdey sanadihii 2010 & 2011 oo lagu jabsadey nidaamkooda, Gemalto ayaa sheegeysa in shirkadaha sirdoonka ee dalalka Maraykanka iyo UK ay basaasi karaan oo keliya 3G iyo 4G, laakiin markii la sameeyey nidaam kale oo lagu sugaayo naqlinta ama “Transfer” oo aamin ah awood danbe uma yeelan ayey leedahay iyada oo macaamiisha niyadda u dejineysa.
Warbixin dheer oo uu daabacay joornaalka The Intercept ayaa lagu sheegey sida hay’adaha sirdoonka ee Maraykanka iyo Ingriisku ay u jabsan jireen Kaararka teleefanada iyada oo aysan ogaan shirkadaha bixiya adeega teleefanada, waxaana joornaalku ka soo xigtey warbixinta Edward Snowden oo ah nin kashifa siraha sirdoonka horeyna uga shaqeyn jirey hay’adda NSA ee dalka Maraykanka.
Waxaa la isweydiinayaa in shirkado gaar loo leeyahay nidaamoooda la jabsado si loo dhegaysto dadka caadiga ah waxa u baneyn kara hay’adaha sirdoonka ee dalalkaas iyaga oo denbi weyn ka dhiga weerarada dhanka Cyber-ka ah ama Kunbuyuutarada la adeegsado. Hay’adaha sirdoonka ee dalalka U.S iyo UK ayaa horey loogu eedeeyey in ay dhegaystaan dadka teleefanadooda, akhritaan fariimaha Emailka, dadka ay dhegaystaan waxaa ka mid ahaa dad madax ah iyo kuwo caadi ah.